Mvura yekuchengetera Tank Vagadziri & Vatengesi - China Mvura Kuchengetedza Tank Fekitori
A-1 Piro Yemvura Tangi Matangi acho anogadzirwa nemucheka wakasimbiswa nePVC / TPU yakaputirwa uye inoratidza chimiro chetsamiro kana tangi razara. Inogona kushandiswa kuchengetera mvura yekumaindasitiri, mvura yemoto, kunaya kwemvura inonaya, mvura yekudiridza, kongiri inosanganisa mvura, mutserendende mvura yakasvibira, yekuchenesa mvura yemasewage uye oiri musimende. Zvakanakira izvi ndezvekuti: inogona kupetwa kana isina chinhu, iyo huremu mwenje uye nyore kutakura, pane-saiti kuisirwa kuri nyore, hupenyu hwakareba uye hwakaderera hwekuchengetedza mitengo. Denge se followi ...
Chigadzirwa ipfupi sumo Cylindrical Mvura Tangi inogadzirwa nemucheka wakasimbiswa nePVC / TPU yakaputirwa uye inoratidza chimiro chesimbi kana tangi razara. Inogona kushandiswa kuchengetera mvura yekumaindasitiri, mvura yemoto, kunaya kwemvura inonaya, mvura yekudiridza, kongiri inosanganisa mvura, mutserendende mvura yakasvibira, yekuchenesa mvura yemasewage uye oiri musimende. Zvakanakira izvi ndezvekuti: inogona kupetwa kana isina chinhu, iyo huremu mwenje uye nyore kutakura, pane-saiti kuisirwa kuri nyore, hupenyu hwakareba uye hwakaderera hwekuchengetedza mitengo. S ...
Iko hunyanzvi hwe tangi rectangular yakafanana neiyi piro tangi, inoshandiswa zvakanyanya mukufambisa, kudiridza kwepurazi, kushandiswa kwemafuta uye mamwe maindasitiri ane hukama. Kukwanisa kwayo ndiko kwakanyatso rurama, nekuda kwechimiro chayo. Uye inoda zvishoma zvigadzirwa kupfuura piro tangi, saka zvine mutengo-unoshanda.